Adeegsiga Isku Dhafka
Adeegsiga Isku Dhafka Waxay ku taalaa magaalada taariikhiga ah ee Xi'an, inta udhaxeysa xarunta ganacsiga iyo wabiga TaoHuaTan, mashruucu hadafkiisu ma ahan oo keliya inuu isku xiro wixii tagay iyo kan hada jira laakiin sidoo kale magaalada iyo dabeecadda. Waxaa dhiirrigaliyay sheeko loo yaqaan 'Peach' ubaxyo guga Shiinaha, mashruucu wuxuu bixiyaa nolol quruxsan iyo goob shaqo iyadoo la siinayo xiriir dhow oo dabiiciga ah. Dhaqanka Shiinaha, falsafadda biyaha buurta (Shan Shui) waxay leedahay macno muhiim ah oo ku saabsan xiriirka ka dhexeeya aadanaha iyo dabeecadda, sidaas darteed iyadoo laga faa'ideysanayo muuqaalka biyaha ee goobta, mashruucu wuxuu bixiyaa meelo ka turjumaya falsafada Shan Shui ee magaalada.
Khamiis 4 Bisha Labaad 2021
Isbitaal Caadi ahaan, isbitaalku wuxuu u muuqdaa meel bannaan oo leh midab dabiici ah oo liita ama agab sababta oo ah sheyga qaab-dhismeedka dabiiciga ah si loo wanaajiyo shaqeynta iyo waxqabadka. Sidaa daraadeed, bukaanku waxay dareemayaan inay ka soocayaan nolol maalmeedkooda. Waa in tixgelin la siiyaa jawi deggan oo ay bukaanadu ku bixin karaan oo ka madaxbanaanaan karaan walbahaarka, waa in la qaataa. Nashqadeeyeyaasha TSC waxay bixiyaan meel furan, raaxo leh iyagoo dejinaya sagxad furan oo leh L-qaab leh iyo fallaaraha waaweyn iyagoo adeegsanaya waxyaabo badan oo alwaax ah. Muuqaal diiran oo ku saabsan qaab dhismeedka ayaa isku xireysa dadka iyo adeegyada caafimaadka.
Arbaco 3 Bisha Labaad 2021
Hoyga Deggenaanshuhu Guriga 'Slab House' waxaa loogu talagalay in lagu farsameeyo agabyada dhismaha, oo la isugu daro alwaax, wax la taaban karo, iyo bir. Naqshadeynta ayaa hal mar ah mid casri ah isla markaana weli caqli badan. Daaqadaha waaweyni waa meel fogaan ah, laakiin waxay ka ilaalinayaan cimilada iyo aragtida waddada by slabs la taaban karo. Jardiinooyinka ayaa si xoog leh uga dhex muuqda guriga, labadaba dabaqa hoose iyo dabaqa koowaad, u oggolaanaya deggeneyaasha inay dareemaan inay ku xiran yihiin dabeecadda markay la macaamilaan guriga, abuuraya qulqul gaar ah marka mid laga guuro albaabka laga galo meelaha nool.
Talaado 2 Bisha Labaad 2021
Guri Gurigu waa mid cagaaran oo loo dheereeyay labadaba diyaaradda iyo habka loo yaqaan 'stereoscopic', oo u abuuraya jawi wanaagsan deggeneyaasha iyo magaalada labadaba. Gobolka qoraxda leh ee Aasiya, Breeze Soleil la isticmaalayo cagaaran waa hab wax ku ool ah oo loo fikiro. Kaliya ma aha shaqada qorraxda ee xagaaga laakiin sidoo kale ilaalinta qarsoodiga, ka fogaanshaha buuqa wadada iyo saameynta qaboojinta ee waraabinta otomaatiga ayaa la heli karaa.
Kaniisad Marka la eego kordhinta bulshada Katooliga iyo kororka dalxiiska ee jasiiradda Samui, Suratthani. Maryan Gargaar oo ah kaniisada masiixiga ee banaanka waxaa loogu talagalay qaab iskudhaf ah oo gacmaha salaadda, baalalaha Angle iyo Rays ee Ruuxa Quduuska ah. Booska gudaha, amniga sida hooyada hooyada. Isticmaalka mugdiga dheer ee iftiinka dheer iyo ciriiriga ah iyo baalash culus oo culeyskiisu culus yahay oo baalashleynaya oo maraya iftiinka nalka ayaa loo dhisay in lagu abuuro hoos hadhsan oo isbeddelaya waqti laakiin wali sii xajista raaxada gudaha. Yaree qurxinta astaanta iyo isticmaalka ashyaa'da dabiiciga ah sida is-hoosaysiinta nabadda ee maskaxda inta aad tukanaysid.
Axad 31 Bisha Koobaad 2021
Hoyga Deggenaanshuhu Gurigu wuxuu isticmaalaa qaab qurxin casri ah iyadoo la ilaalinayo barxadda dhexe, taas oo meesha ka saareysa dhaqanka reer Kuweyt ee dhaqanka guryaha. Halkan degenaanshaha waxaa loo oggol yahay inuu qiro wixii hore iyo kan hadda jira, iyada oo aan wax khilaaf ah dhicin. Muuqaalka biyuhu wuxuu marayaa tillaabada albaabka weyn ee bannaanka u baxayo, sagxadda ilaa muraayadda saqafka waxay ka caawineysaa sii wadidda meelaha bannaan inay u furnaadaan, taasoo u oggolaaneysa isticmaaleyaasha inay dhex maraan bannaanka iyo gudaha, kii hore iyo kan hadda, si dadaal la'aan ah.
Ballo Hadalka La Qaadan Karo Isniin 1 Bisha Saddexaad
CATINO Qolka Musqusha Axad 28 Bisha Labaad
Temple Keegga Keega Sabti 27 Bisha Labaad
Adeegsiga Isku Dhafka Isbitaal Hoyga Deggenaanshuhu Guri Kaniisad Hoyga Deggenaanshuhu